အသကျငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဆံပငျတှဖွေူလာတဲ့ ပွဿနာအရငျးအမွဈကဘာဖွဈမလဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Health & Beauty/အသကျငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဆံပငျတှဖွေူလာတဲ့ ပွဿနာအရငျးအမွဈကဘာဖွဈမလဲ ? ? ?
အသကျငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဆံပငျတှဖွေူလာတဲ့ ပွဿနာအရငျးအမွဈကဘာဖွဈမလဲ ? ? ?
So Shwe February 24, 2022	Health & Beauty Leaveacomment
အသကျကွီးလာတဲ့အခါမှာ ဆံပငျတှဖွေူလာတာဟာ သဘာဝဆိုပမေယျ့ ဆံပငျတှဖွေူလာတယျဆိုတိုငျး အသကျကွီးလာတယျလို့မဆိုနိုငျပါဘူး။ မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့ အသကျငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဆံပငျဖွူတာလညျး မဟုတျပွနျဘူး။ ဒီတော့ ဘာကွောငျ့ဆံပငျဖွူရတယျဆိုတာကို Soshwe စာဖတျပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
အမရေိကနျနိုငျငံနဲ့ ဘရားဇီးနိုငျငံက သုတသေနပညာရှငျတှရေဲ့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြထဲမှာတော့ အသကျငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဆံပငျဖွူလာတာဟာ မိသားစုအပူတှကေို ထမျးရတာကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ၊ လုပျငနျးခှငျမှာ ဖိအားအရမျးမြားတာကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ၊ စိတျဖိစီးမှု အလှနျအကွူးခံစားရတဲ့သူတှရေဲ့ ဆံနှယျတှဟောလညျး လှယျကူစှာ ဖွူလာနိုငျတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဦးရပွေားဆိုငျရာဆေးပညာရှငျတှေ ညှနျးပေးတဲ့ဆေးတှကေို သောကျသုံးခွငျးအားဖွငျ့ (သို့) စိတျရောဂါပညာရှငျတှေ ညှနျကွားထားတဲ့နညျးလမျးကို တသှမေသိမျး လိုကျနာခွငျးအားဖွငျ့ ဆံနှယျတှေ ဖွူဖှေးလာတာကို ရပျတနျ့နိုငျတယျလို့လညျး ဆိုထားပါတယျ။ အသကျကွီးလာလို့ ဆံပငျဖွူလာတာက သဘာဝဖွဈရပျပဲဆိုပမေယျ့ လိုတာထကျပိုပွီး မွနျမွနျဆနျဆနျ ဆံပငျဖွူလာတာကတော့ သခြောပေါကျ စိတျဖိစီးမှုဒဏျကွောငျ့ဖွဈတယျလို့ ပညာရှငျတှကေ အခိုငျအမာ ဆိုထားပါတယျ။
ဟားဗတျဒျတက်ကသိုလျက ပါမောက်ခခြုပျ Ya-Cieh Hsu ဆိုသူဟာ BBC သတငျးဌာနကို “သုတသေနပညာရှငျတှရေဲ့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြအရ စိတျဖိစီးမှုဟာ ဆံပငျအရောငျနဲ့ အသားအရအေရောငျကို ပွောငျးလဲစတေဲ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျးက “Melanin” ကို ထိခိုကျစတောကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုမြားတဲ့သူတှရေဲ့ ဆံပငျအရောငျနဲ့ အသားအအရအေရောငျ ပွောငျးလာတာဖွဈတယျ” လို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
နှလုံးခုနျနှုနျးမွနျပွီး သှေးဖိအားတိုးလာခွငျးကလညျး “Melanin” ကို လြော့ကစြတောကွောငျ့ အသားအရညျတှေ ၊ ဆံနှယျတှကေို ပကျြစီးစနေိုငျပွီး အဆိုပါပကျြစီးမှုကို ပွနျလညျကောငျးမှနျလာအောငျ ပွုလုပျနိုငျစှမျးမရှိဘူးလို့လညျး ပါမောက်ခကွီးက ဆိုပါတယျ။
သုတသေနပညာရှငျတှကေ လူတှရေဲ့ခန်ဓာကိုယျအတှငျးက “Melanin” လြော့ကမြှုကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အသားအရနေဲ့ ဆံနှယျပကျြစီးမှုအတှကျ ကုသပေးနိုငျမယျ့နညျးလမျးကို ရှာဖှတေဲ့အခါမှာတော့ ကွှကျတှကေို အသုံးပွုခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထိရောကျတဲ့ကုသမှုကို မရှာတှသေ့ေးပမေယျ့ သိပ်ပံပညာရှငျတှအေနနေဲ့ကတော့ ဆကျလကျကွိုးစားရှာဖှနေဆေဲဖွဈတယျလို့ ဟားဗတျဒျတက်ကသိုလျက ပါမောက်ခခြုပျ Ya-Cieh Hsu က ဆိုပါတယျ။
အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်တွေဖြူလာတဲ့ ပြဿနာအရင်းအမြစ်ကဘာဖြစ်မလဲ ? ? ?
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ဆံပင်တွေဖြူလာတာဟာ သဘာဝဆိုပေမယ့် ဆံပင်တွေဖြူလာတယ်ဆိုတိုင်း အသက်ကြီးလာတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူတာလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ဒီတော့ ဘာကြောင့်ဆံပင်ဖြူရတယ်ဆိုတာကို Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ ဘရားဇီးနိုင်ငံက သုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်ထဲမှာတော့ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူလာတာဟာ မိသားစုအပူတွေကို ထမ်းရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖိအားအရမ်းများတာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ဖိစီးမှု အလွန်အကြူးခံစားရတဲ့သူတွေရဲ့ ဆံနွယ်တွေဟာလည်း လွယ်ကူစွာ ဖြူလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဦးရေပြားဆိုင်ရာဆေးပညာရှင်တွေ ညွှန်းပေးတဲ့ဆေးတွေကို သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် (သို့) စိတ်ရောဂါပညာရှင်တွေ ညွှန်ကြားထားတဲ့နည်းလမ်းကို တသွေမသိမ်း လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် ဆံနွယ်တွေ ဖြူဖွေးလာတာကို ရပ်တန့်နိုင်တယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ အသက်ကြီးလာလို့ ဆံပင်ဖြူလာတာက သဘာဝဖြစ်ရပ်ပဲဆိုပေမယ့် လိုတာထက်ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆံပင်ဖြူလာတာကတော့ သေချာပေါက် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက အခိုင်အမာ ဆိုထားပါတယ်။
ဟားဗတ်ဒ်တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခချုပ် Ya-Cieh Hsu ဆိုသူဟာ BBC သတင်းဌာနကို “သုတေသနပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ဆံပင်အရောင်နဲ့ အသားအရေအရောင်ကို ပြောင်းလဲစေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက “Melanin” ကို ထိခိုက်စေတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့သူတွေရဲ့ ဆံပင်အရောင်နဲ့ အသားအအရေအရောင် ပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ပြီး သွေးဖိအားတိုးလာခြင်းကလည်း “Melanin” ကို လျော့ကျစေတာကြောင့် အသားအရည်တွေ ၊ ဆံနွယ်တွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အဆိုပါပျက်စီးမှုကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့လည်း ပါမောက္ခကြီးက ဆိုပါတယ်။
သုတေသနပညာရှင်တွေက လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းက “Melanin” လျော့ကျမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အသားအရေနဲ့ ဆံနွယ်ပျက်စီးမှုအတွက် ကုသပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို ရှာဖွေတဲ့အခါမှာတော့ ကြွက်တွေကို အသုံးပြုခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ကုသမှုကို မရှာတွေ့သေးပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ ဆက်လက်ကြိုးစားရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ဟားဗတ်ဒ်တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခချုပ် Ya-Cieh Hsu က ဆိုပါတယ်။
Previous ရခေဲနတေဲ့ အန်တာတိတျပငျလယျပွငျကွီးအောကျမှာ ၈ မိနဈခနျ့ရကေူးနိုငျခဲ့တဲ့ အံ့ဖှယျလူသား။
Next ကျောဖီရဲ့ စိတျဝငျစားဖှယျ အကွောငျးအရာမြား။
သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျကမ်ဘာလေးတဈခုကိုဖနျတီးဖို့ . . . သငျခနျးစာအသဈတှလေလေ့ာရငျး ပြျောရှငျစရာဂိမျးတှနေဲ့အတူ . . . ပဟဠေိတှလေညျး ဆော့လိုကျရအောငျ . . . …